नेपाल आज | दुर्गा प्रसाईको दावी– ओलीले भनेका मात्रै हुन, एमसीसी पास गर्ने नियत थिएन
भारत प्रचण्डसँग रुष्ट– हामीले सत्तामा पुर्यायौं, विआरआईमा हस्ताक्षर गरेर छिमेकमा गोही छोडदिनुभो
नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् तत्कालिन प्रधनमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफु सरकारमा हुँदा मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पास गराउन भुमिका नेखेलेकै कारण सत्ताच्युत हुनु परेको खुलासा भएको छ।
संसदवाट एमसीसी पास गर्ने भनेर चर्का भाषण गर्ने तर प्रकृयागत रुपमा अगाडि नवढ्ने दोहारो चरित्र देखाएकै कारण अदृष्य शक्तिले उनलाई सत्ताच्युत गरेको स्रोतको दावी छ । मेडिकल माफियाका रुपमा चिनिएका मेडिक कलेज सञ्चालन दुर्गा प्रसाईले पनि एमसीसीकै कारण ओली प्रधानमन्त्रीवाट हट्नु परेको खुलासा गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री हुँदा र त्यसपछिका उनको वोली र ब्यवहारले पनि ओली एमसीसीको पक्षमा नरहेको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले जसरी पनि एमसीसी पास गर्नु पर्छ भन्थे। एमसीसीको विरोध गर्नेहरुले एमसीसीका वारेमा नपढेको र वुझ्नै नखोजेको उनले वताउँदै आएका थिए ।
यतिमात्र होईन, शेरवहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि संसदलाई सम्वोधन गर्ने क्रममा समेत ओलीले ‘एमसीसी’ सम्झौता के गर्नुहुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए । सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी उल्लेख नभएको भन्दै उनले ‘एमसीसी बिर्सनु भयो कि क्या हो ? मैले देखिनँ कतै। नेपाली जनताले जान्न चाहेको छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, के गर्नुहुन्छ एमसीसी तपाईं’ भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।
तर, २५ साउन ०७८ को केन्द्रीय समिति बैठकपछि उनको वोली फेरीएको छ। एमसीसीका विषयमा ओली यूटर्न भएका छन् । वैठकलाई सम्वोधन गर्दै उनले एमसीसी संशोधन गरेर मात्रै पारित हुनुपर्ने बताए।
उनले बरु सत्तारुढ दल नै एमसीसीबारे बोल्न नसकेको समेत बैठकमा बताए । ‘सत्तारुढ दल एमसीसीको बारेमा किन बोल्न नसकेको ? तपाईंहरुकै पालामा सम्झौता गरेको होइन ? १ सय ६५ को कीर्तिमान मतले विश्वासको मत लिएकै छ त पास गर्दा भइहाल्यो किन हामीलाई दोष ?’, उनले भनेका थिए ‘हामी त स्पष्ट छौँ । हाम्रो पार्टीले बनाएको कार्यदलले दिएको सुझाव र बुद्धिजीवी र विज्ञहरूले दिएको सुझावहरूको आधारमा जनताको भावना अनुसार संशोधन सहित पास हुनु पर्दछ ।’
नेपाल भ्रमणमा रहेकी एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारसँगको भेटमा पनि ओलीले एमसीसी अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने बारे सरकार पहिले स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। आफु सरकारमा छँदा एमसीसी अनुमोदन गर्न इमान्दार प्रयास गरेको तर, तत्कालीन सभामुखले संसदमा पेस नगरिदिँदा अघि बढ्न नसकेको वताएका उनले सरकार कसरी अगाडि बढ्छ त्यसमा भर पर्ने वताएका थिए ।
अध्यक्ष ओलीका शुभचिन्तक दुर्गा प्रसाईले पनि एक अन्तर्वार्तामा ओलीले एमसीसी अनुमोदन गर्न नचाहेको प्रष्ट पारेका छन् । क्यानडा नेपाल नामको युट्युव च्यानलले भदौ ७ गते अपलोड गरेको भिडियो अन्तरवार्तामा चीनको विआरआई र अमेरिकाको एमसीसीका कारण मुलुकमा वाहिरी हस्तक्षेप वढेको वताए । ‘हस्तक्षेप हुँदैनथ्यो। वहाँहरुले एक जनाले विआरआईमा र अर्कोले एमसीसीम हस्ताक्षर गर्नु भयो’ उनले भनेका छन्–‘इण्डियाको भनाई त सिधा छ त । प्रचण्डलाई हामीले १२ वर्ष राखेर १२ वुँदे समझदारी गरेर सत्तामा पुर्यायौं। विआरआईमा हस्ताक्षर गर्नुभो। ठुलो मगरमछ (गोही) ल्याएर हाल्दिनु’भो, छिमेकमा । अनि शेरवहादुर देउवाले एमसीसी पास गर्नु’भो, क्याविनेटवाट। छ त वहाँहरुलाई त।’
एमसीसी पास होला त? भन्ने जिज्ञासामा भने प्रसाईले कुनै पनि हालतमा पास हुने वताए । उनले भने– ‘होईन, त्यो त गर्नै पर्छ । नगराईकन छोड्दै–छोड्दैन अमेरीकाले। गराउने भनेर पहिलै कमिटमेन्ट गरेर, पहिलै भ्याईसकेको रहेछ।’
उनले केपी ओलीलाई एमसीसीकै कारणले सत्तावाट हटाईएको दावी गरे । ‘केपी ओली भएदेखि एमसीसी पास हुँदैनथ्यो’ उनले भने–‘वहाँले भनेको मात्र हो, म त वुझ्छुनी त कुरा त। किनभने कसैले पनि मृत्यु पत्रमा हस्ताक्षर गर्दैननी त। केपी ओलीले गर्नुहुन्नथ्यो। केपी ओलीले वुझेको थियो कुरो।’
एमसीसीसँगै नेपाल हिन्दुराष्ट्र घोषणा हुने चिन्ताले ओलीलाई हटाउन पश्चिमाहरु लागेको उनले दावी गरे । ‘सवैभन्दा ठुलो कुरो के हो भने केपी ओली हुँदाखेरी यहाँ हिन्दुराज्य कायम हुन्छ भनेर पश्चिमाहरु लागेका हुन । केपी ओलीले अव लगभग ढिलो/छिटो हिन्दुराज्य कायम गर्न लाग्नु भएको थियो’ प्रसाईले थपे–‘किनभने ०६२/०६३ को जनआन्दोलनको म्यान्डेट थिएननी त धर्मनिरपेक्षता गर्ने त। वहाँले गर्नु हुन्थ्यो क्या (हिन्दुराष्ट घोषणा) । तेती विश्वास चै थियो । त्यहि भएर वहाँले पशुपतिमा पुजा गर्ने, जलहरी चढाउने, रामलक्ष्मणको मन्दिर/मुर्ति वनाउने, काम त सुरुवात गरिसक्नु भएको थियो नी त। त्यो त जनतामा म्यासेज गईसकेको थियो नी त।’
अव देशमा हिन्दु राज्यको पक्षमा धेरै ठुलो आन्दोलन हुने पनि उनले सुचना दिएका छन् । ‘अव राजावादीको आन्दोलन हुँदैन यहाँ। राजावादी, कमल थापाहरुलाई पत्याउँदैनन मान्छेले’ उनले भने–‘हिन्दु राज्यको लागि माओवादीवाट र अरु–अरु पार्टीवाट आएका जुन छन् नी, फियर मान्छेहरुले आन्दोलन अगाडि वढाउँछन् ।’
ओली र प्रचण्डलाई दुर्गा प्रसाईको चुनौती– झापामा मसँग चुनाव लड्न आउनोस् !
केपी शर्मा ओली एमसीसी दुर्गा प्रसाई फातिमा सुमार